Naya Post Nepal | किन छुटेनन् पल ? कानुनको गलत प्रयोग गरियो भन्दै पलका वकिल मिडियामा (हेर्नुस् भिडियो )
किन छुटेनन् पल ? कानुनको गलत प्रयोग गरियो भन्दै पलका वकिल मिडियामा (हेर्नुस् भिडियो )
ना वा लि ग लाई ब ला त्का र गरेको अभियोगमा थुनामा रहेका अभिनेता पल शाहको थुनछेक बहस आज हुँदैछ। जिल्ला अदा लत नवलपुरमा आज शाहविरुद्धको मुद्दामा थुनछेक बहस हुन लागेको हो।
त्यसका लागि मंगलबारै शाहलाई तनहुँ हिरासतबाट नवलपुर ल गिएको थियो। शाहविरुद्ध तनहुँ र नवलपुर जिल्ला अदालतमा ज ब र्ज स्ती क र णी मु’द्दा द’र्ता भएको छ। मंगलबार नवलपुर का जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासले पलको ब’यान लिएको थियो।
आज नवलपुरमा सुरूमा सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस हुने र पछि शाहको त’र्फबाट ९ जना वकिलहरूले बहस गर्ने तयारी गरेका छन्। हिजो अधिकारीको इजलासले नै बयान लिएका का रण थुनछेक बहस पनि उनैको इजलासले गर्ने नवलपुर जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी लाल बहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए।
ना बा लिग गायिकालाई ब ला त्का र गरेको अभियोगमा शाह विरुद्ध नवलपुरमा चैत ३ गते ज ब र्ज स्ती क र णी मुद्दा दायर भएको थियो। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को १ र २ अनुसारको कसुर गरेको दाबी गर्दै शाहवि’रुद्ध नवलपुर र तनहुँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
यो पनि – आगामी वैशाख १ गतेदेखि नेपालमा प्रदर्शन हुने फि ल्मले गर्ने कमाइको बाँडफाँड (सेयर) सम्बन्धी नयाँ निर्णय ला गु हुने भएको छ ।अशोक शर्मा सं’योजक रहेको प्रदर्शन विशेष कार्यदलले नयाँ वर्षदेखि सेयर बाँडफाँटबारे नयाँ निय’म लागु हुने निर्णय गरेको हो ।
जसअनुसार प्रदर्शक, वितरक र नि’र्माताबीच सहमति जुटेको छ ।फिल्म रिलिजको पहिलो साता प्रदर्शक र निर्माताबीच ५०-५० प्रतिशत सेयर बाँ’डफाँ’ड हुनेछ भने दो’स्रो साता पनि दुवै पक्ष बीच ५०-५० प्रतिशत सेयर वि’भाजन हुनेछ । तेस्रो साता निर्मा ताले ३५ प्रतिशत सेयर पाउनेछन् ।
‘नेपालमा प्रदर्शन हुने सबै फिल्ममा यो नियम लागु हुनेछ,’ सं’यो जक अशोक शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले विशेषगरी नेपाली फिल्मका निर्मातालाई हेरेर यो नियम ल्या एका हौं । अन्ततः यसले निर्मातालाई नै फाइदा पुग्छ ।’को’रो ना महामारीले थलिएको
२०७८ चैत्र २४, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 3180 Views